सुन्ने, कि हेर्ने ! « LiveMandu
१५ पुष २०७५, आईतवार २०:५४
यसै महिना यो पङ्तीकार एक अन्तरवार्ताका क्रममा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन) को पाटन ढोका स्थित कार्यालयमा पुग्दा स्टुडियो बाहिरको चियापसलमा टेलिभिजन चलिरहेको थियो । भारतीय खेल जगतको एक ठूलो मञ्च आइपिएलको यस सँस्करणमा नेपाली खेलाडी पहिलो पटक छानिएकाले बहुचर्चित रह्यो । सबैजसो टेलिभिजन भएङ्का घरमा कम्तीमा युवाहरू चाहिँ आइपिएल नै हेरिरहेका पाइन्छन् यो सिजनमा । क्रिकेट चलिरहँदा टेलिभिजनमा बीचमा व्यापारिक विश्राम आयो । पसलेले हत्तपत्त टेलिभिजन बन्द गरिदिए र रेडियो खोले । रेडियोको फ्रिक्वेन्सी ९आवृत्ति० परिवर्तन गर्दागर्दै उनको चिया पनि उम्लिएर पोखियो, रेडियो पनि बजेन । अन्तरवार्ताको समय ढिलो भएकाले फुर्स्दिलो समयमा चासो राखियो, ’अङ्कलको रेडियो सुन्ने बानी चाहिँ मेरो चिया खाने बानी जत्ति नै रहेछ १ ’ हँसिला ती काकाले मन खोले ।
‘रेडियो नेपाल’ बजाउन खोजेका रहेछन् । “हामी त गाउँमा जन्मे हुर्केका मान्छे यही रेडियो सुन्दै आयौँ । अब अहिले त एफएम भन्छ जताततै । रेडियोमा पनि खासै पहिलेजस्ता प्रस्तोता नि छैनन् । एफएमै बज्छन्, गीतै बजाउँछन् । समाचार सहरका मात्रै आउँछन् ।“ ९ काकाले समाचारकै शैलीमा पिडा पोखे । उनको पीडाले पङ्तिकारलाइ विगतमा धकेल्यो जतिबेला कक्षा १र२ मा पढ्ने बेला ’फिलिपिन्स’को रेडियोमा एउटै स्थायी च्यानल हुन्थ्यो रेडियो नेपाल । सुदूरपश्चिमको बैतडीमा कुनै एफएम स्टेसन हामीले सुनेका थिएनौँ । राति ७ बजे खाना पकाउने बेला हुनाले हामी ९ बजेको समाचार मात्रै सुन्न पाइन्थ्यो, त्यो पनि सानो आवाजमा । ठुलो आवाजमा रेडियो बजेको सुनिए घरमाथिको बाटोमा हिँड्ने ’माउवादी’को डर हुन्थ्यो । अहिले एक दशक पछि देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयता, समावेशिता लगायतका उपलब्धि हात पारेको छ । मन खोलेर रोजेको एफएम सुन्न पाइएको छ । ’दी वर्ल्ड फ्याक्ट्री’का अनुसार संसारमा ४४ हजार रेडियो स्टेसन छन् भने हामी अत्यधिक सङ्ख्यामा रेडियो स्टेसन हुने देशमा पर्छौँ ।
रेडियो प्रविधि विश्वमा फैलिएको शताब्दी नाघ्यो । सन् १९०१ मा माकोर्नीले रेडियो सङ्केतलाई आन्ध्र महासागर वारपार २१०० माइल टाढासम्म सुन्ने बनाएपछि यसको बृहत् विस्तार भएको थियो । नेपालमा भने सन् १९५० को अप्रिल ९२० चैत्र २००७० देखि काठमाडौँमा औपचारिक रूपमा सरकारी स्तरबाट प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो खुलेको हो जुन अहिले रेडियो नेपाल छ । पहिलो गैरसरकारी रेडियो खुल्न रेडियो नेपालले ५ दशक कुर्नु पर्‍यो भने झन्डै ६५ वर्ष पछि रेडियो नेपाललाई नै चुनौती दिनेगरि सयौँ सामुदायिकरगैरसरकारी रेडियो स्टेसनहरू खुले । २०५४ सालमा स्थापना भएको रेडियो सगरमाथा नेपालको मात्र हैन दक्षिण एसियाकै पहिलो गैरसरकारी रेडियो भएको दाबी गरिन्छ । अहिलेको सङ्ख्या मात्र हेर्ने हो भने पनि रमाइलो छ ।
एक रेडियो अन्तरवार्ताका क्रममा बोल्दै लेखक
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने इजाजत प्राप्त एफएम रेडियो ७ सय ४१ पुगेका छन् । ती मध्ये देशभर करिब ३ सय १५ सामुदायिक रेडियो छन् । रेडियो नेपाल अन्य सरकारी निकाय र सरकारी स्वामित्वको संस्थाहरूजस्तै थला परेकै अवस्थामा छ । काठमाण्डौँमा चिया बेचिरहेका ती काका जस्तै गाउँमा घाँस काट्दै, गोबर सो हर्दै या खाना पकाउँदै गरेका आम नेपालीहरूले प्रस्ट रूपमा रेडियो नेपाल सुन्न सक्दैनन् । नीरक्षरहरुले पनि सूचना पाउन सक्ने, प्रविधिभन्दा टाढा रहेकाहरूले पनि मनोरञ्जन पाउन सक्ने रेडियोको भूमिका भने साँच्चै बढ्दो छ । अहिले पनि सडकले सहरसँग नजोडिएका र अरू सञ्जालबाट सिंहदरबारको पिठ्युँपछाडि रहेका दूरदराजका गाउँसम्म सिंहदरबार जोडिन सक्छ भने त्यही सिंहदरबारबाट तरंगित हुने रेडियो नेपाल हो । उनीहरू त चाहन्छन् एएएमहरुजस्तै स्पष्ट आवाजमा रेडियो नेपालको तरङ्ग साँझविहान घन्किरहोस् तर यो किन भइरहेको छैन अनुत्तरित प्रश्न भयो रु अहिलेलाई यो प्रसङ्ग यही बिट मारौँ !
नेपालमा रेडियो संस्कृति
अहिले नेपालमा सरकारी, व्यावसायिक र सामुदायिक गरेर तीनप्रकारका रेडियोहरू छन् । सरकारी अथवा रेडियो नेपालको श्रोतमा पहुँच सर्वाधिक भए पनि त्यसको गुणस्तर र जनताको सहजताका हिसाबले न्युनक्रममा छ । नामैले व्यावसायिक व्यावसायिक रेडियोहरू नाफामुखी र व्यापारमुखी छन् । तिनले आमनागरिकका चासो र समस्या, दुःख र आवाज तर्फ ध्यान दिने कुरा भएन । उनीहरू सहरमुखी मात्र हैन विज्ञापनमुखी र बजारमुखी छन् । यद्यपि उनीहरूको कारण रेडियोको क्षेत्र भने विस्तार भएकै छ र केही रोजगारी समेत सिर्जना भएको छ । तेस्रो र सर्वाधिक पहुँचमा रहेका सामुदायिक रेडियोहरू प्रभाव र पहुँचमा निकै निपुण छन् । उनीहरू सङ्ख्यामा र गुणस्तरमा यिनै सामुदायिक रेडियोहरू नागरिकमाझ उपलब्ध र लोकप्रिय छन् ।
सामुदायिक रेडियोहरूले नेपालको अधिकतम निरक्षर नागरिकलाई सूचना, समाचार र मनोरञ्जन मात्र हैन विविध सामुदायिक सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । स्थानीय मातृभाषाको जागरण र स्थानीय सरकारसम्म आवाज पुर्‍याइदिएर सामुदायिक रेडियोहरूले समुदायलाई गुन लगाएका छन् । विभेद, पछौटेपन र आजको विश्वभन्दा टाढा रहेको समुदायलाई उनीहरूकै लवजमा सूचना र समाचार पस्किन सामुदायिक रेडियोहरूका आफ्नै चुनौती छन् ।एक तथ्याङक अनुसार नेपालका फरक ५० भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै ८० प्रतिशत बढी जनसंख्यासामु एकै पटक पुग् नसक्ने सामर्थ्य हाम्रा रेडियोहरूसँग छ । साँचो अर्थमा लोकतन्त्र प्राप्ति पछिको जनजीवनलाई परिवर्तन गर्ने एक मात्रै उपलब्धि रेडियोमार्फत सूचना र मनोरञ्जन पाउनुभएको यथार्थ छँदै छ ।
गैरसरकारी हुनुले मात्र हैन सरकारको आवश्यक सहयोग बिना खुलेका रेडियोहरूको आफै सञ्चालन हुने सम्बन्धी पनि समस्या त छन् । सामुदायिक रेडियोहरू कति ’सामुदायिक’ छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि गाह्रो छ । सरकारले हिजोसम्म चाहिँ सहयोग नगरेको मात्र हैन ’नजर’ पनि नलगाएको हो । सरकारको नजरबिना सञ्चालित रेडियोहरू समुदायकोलागि कति र प्रायोजकहरू र दाताहरूका लागि कति सञ्चालन भए भन्ने अहमद प्रश्न छ । खास गरी ’धर्मान्तरण’ को लागि सामुदायिक रेडियोको प्रयोग भएको र आर्थिक रूपमा सञ्चालित हुन सहयोग लिनु आफ्नो बाध्यता भएको सहज उत्तर रेडियोहरूले दिने गरेका छन् । उसो त यसका लागि कर असुलीको अनुपातमा कल्याणकारी विज्ञापन समेत दिन कञ्जुस्याइ गर्ने आवश्यक अनुगमन नगर्ने सरकार पनि यसकालागि उत्तिकै जिम्मेवार छ । आइएनजीओहरुमार्फत इसाई मिसिनरीमात्र हैन हाम्रा रेडियोहरूलाई चुनौती भनेको बढ्दो दलियकरण पनि हो । राजनीतिक पार्टी र तिनका गुटै पिच्छेको हितमा काम गर्नेगरि सञ्चालित हुनुको बाध्यता बारेको पनि समस्या समाधान हुन जरुरी छ ।
सामुदायिक रेडियोहरूको लागि भनेर खोलिएका संस्थाहरूले पनि केही रियलाइजेसन गर्न जरुरी छ । रेडियो लाइ समुदायतिर हैन राजधानीतिर केन्द्रित गराइरहेका उनीहरूलाई राजधानीमा रेडियो मर्निङ वाक गर्ने बेला कानमा इअरफोन हालेर मात्रै सुनिने तथ्य थाहा हुनुपर्छ । खास गरी विपदको बेला छिटो सन्देश पुर्‍याउन र आम रूपमा ग्रामीण भेककै लागि रेडियो हो र हुनुपर्छ । तर रेडियो लाइ सहरसम्म र इन्टरनेटमा भिडियो मात्रै हेर्ने नयाँ पुस्तालाई रेडियोतर्फ आकर्षित गर्न जरुरी छ । संस्थागत भनिने निजी विद्यालयहरूलाई बैङ्कहरूजस्तै मर्ज रमा जान दिशानिर्देश गर्ने रेडियोहरू तुरुन्तै आफू पनि मर्ज रमा गएर आफ्नो परिचय दिनुपर्ने बेला आएको छ । सङ्ख्या भन्दा गुणस्तर र समुदायहितमा समर्पित हुँदै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र विषयवस्तुमा मौलिकपना मात्रै थप्न सके पनि नेपाली रेडियो जगतक गौरवमय गरिमा बरकरार रहन सक्नेछ । परिवारमा बाजेदेखि नातिसम्म, दिदीभाइ र आमाबुबासँग सँगै बसेर समाचार, सूचना, मनोरञ्जन र समसामयिक सामाग्री सुन्न सक्ने चरित्रको रेडियो जगत् निर्माण भए त नयाँ युवा पुस्तालाई पनि ’रेडियो सुन्ने कि भिडियो हेर्ने ’ भनेर दोधार होला । अहिलेको अनलाइन युगमा औसत व्यक्तिलाई पत्रपत्रिकाका पानाभरिका समाचार सुन्ने समय छैन । के त अनलाइनमा समाचारको हेड लाइन मात्र हेरेर शेयर गरिहाल्ने र विश्लेषण समेत गरी भ्याउने कि त युट्युबको भिडियो भण्डारमा रमाउने युवा तथा किशोरकिशोरीहरु भिडियो हर्नेभन्दा रेडियो सुन्नेतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । सक्नुपर्छ । काठमाण्डौँमा चिया बेचिरहेका ती काका र बैतडीको गाउँमा घाँस काट्दै रेडियो सुन्ने दिदीले रेडियो नै छान्नेछन् । यही हाम्रो रेडियो सञ्चारको अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
– हरीशप्रसाद भट्ट